Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Dukaanka dahabka ee Bulgari ee Paris ayaa tirtiray million 10 milyan
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • France Breaking News • Wararka Raaxada • News • Dadka • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Jewelry 10 milyan oo dahab ah oo dahab ah ayaa lagala baxay heist boutique Paris
Dhacdan Paris ayaa dhacday abbaare duhurkii Talaadadii. In kasta oo boolisku aysan weli si rasmi ah u magacaabin dukaankii, ayaa goob joog u ah xoojinta sharciga ayaa lagu arkay dukaanka Bulgari, oo sida muuqata bartilmaameed u ahaa burcadda.
Tuugo ayaa ku dhacay dukaan dahabka Bulgari oo ku yaal bartamaha Paris.
Jewelry 10 milyan oo dahab ah oo dahab ah ayaa laga xaday dharaar cad.
Booliiska Faransiiska ayaa gacanta ku dhigay laba qof oo la tuhunsan yahay kadib markii lagu daba orday xawaare sare.
Dukaan dahab ah oo ku yaal bartamaha Paris oo ku yaal meesha caanka ah ee Vendôme ayay burcadu garaacday waxaana lagu soo waramayaa in la xaday lacag dhan million 10 milyan oo u dhiganta ($ 11.8 milyan) oo dahab ah.
Dhaca ayaa dhacay duhurnimadii Talaadada. Inkastoo boolisku aysan weli si rasmi ah u magacaabin bakhaarka, ayaa waxaa goob joog ka ahaa goob-joogga xoojinta sharciga Bulgari dukaan, oo sida muuqata bartilmaameedka burcaddu ahaa.
Paris booliiska ayaa gacanta ku dhigay laba qof oo la tuhunsan yahay, waxaana wali socda baadi goobka tuugada kale.
Laba tuhmane ayaa la qabtay iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan goobta falku ka dhacay, boolisku waxay sheegeen, iyagoo aan bixin faahfaahin intaas ka badan, laakiin qaar ka mid ah ilaha bilayska ayaa tilmaamay in tuugadu isu rogtay xawaare aad u dheereeya, maaddaama tuhmanayaashu isku dayeen inay baxsadaan iyagoo adeegsanaya BMW baabuur iyo laba mooto.
Sida ay ku warrantay warbaahinta maxalliga ah, hal askari oo boolis ah ayaa dhaawac fudud soo gaaray intii lagu jiray baacsiga, markii uu gaarigu haleelay, halka mid ka mid ah eedaysanayaasha la xirayna lugta laga toogtay.
Tiro aan la ogeyn oo laga shakisan yahay ayaa weli baxsad ah. Sida ay wararku sheegayaan waxay ku guuleysteen inay la baxsadaan alaab badan oo la soo xaday oo lagu qiyaasay ilaa 10 milyan oo euro.
Dhacdadan ayaa ah tii ugu dambaysay ee xargaha dahabka ah ee aadka u sarreeya ee caasimadda Faransiiska xagaagan. Bishii Luulyo, tuug hubeysan ayaa dharaar cad ka qaaday dhagxaan qaali ah iyo dahab qaali ah a Chaumet dukaan u dhow Champs-Elysées. Tuugga ayaa munaasabaddaas lagu qabtay isaga iyo nin la socday wax yar ka dib weerarka, waxaana la soo helay bililiqadii, oo lagu qiimeeyay ku dhawaad ​​million 3 milyan ($ 3.5 milyan).
Kaliya dhawr maalmood ka dib Chaumet heist, laba tuug ayaa ku dhuftay a Diin Van dukaanka, xaday qaar ka mid ah € 400,000 oo lacag caddaan ah, iyo dahab ah oo qiimahoodu lagu qiyaasay million 2 milyan ($ 2.3 milyan).